देउवाको सभापतिको उम्मेद्धवार नै म हुँ, म ब्याक हुन्न : गोपालमान श्रेष्ठ (भिडिओसहित) « रिपोर्टर्स नेपाल
नेपाली कांग्रेसका नेता गोपालमान श्रेष्ठले १४औं महाधिवेशनमा आफूले सभापतिमा उम्मेद्धवारी दिने स्पष्ट पारेका छन् । यसको लागि आफू सम्पूर्ण रुपमा तयार भएर अघि बढिसकेको उनको भनाई थियो । आज विहान नेपाली रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भएको नेपाली बहस कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले सरकारको नेतृत्वले शेरबहादुर देउवाले गर्ने र पार्टीको नेतृत्व आफूले गर्ने सहमति भएको पनि दाबी गरे । प्रस्तुत छ नेता श्रेष्ठसँग पत्रकार धमलाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
तपाईं कांगे्रसमा महामन्त्री, उप–सभापती भइसकेको वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ , महाधिवेशन अघि कांगे्रसमा सधैं किन झगडा हुन्छ ?
तर, द्वन्द्व छ नि नेपाली कांग्रेसमा, अहिलेपनि गुट–उपगुट छ नी होइन ?
होइन डेमोक्रेकिट पार्टीमा छलफल हुनुलाई द्वन्द्वको रुपमा हेर्नु हँुदैन । छलफल भएर निश्कर्ष निकाल्ने कामहरु भइरहेको छ । छलफल हुनु त राम्रो कुरा हो नी होइन र ?
अहिलेको अवस्थामा सरकारले काम गर्न सकेन, शेरबहादुर देउवाले किन जनताको मन जित्न सक्नुभएन ? सरकारको कामलाई लिएर जनस्तरबाट गुनासो आउन थाल्यो नि ?